HomeWararka Ciyaaraha MaantaMadaxweynaha barcelona Joan Laporte oo kalsooni ka muujiyay in uu messi sii joogi doono barcelona.
Madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa kalsooni ku qaba in Lionel Messi uu sii joogi doono Nou Camp wixii ka dambeeya heshiiskiisa haatan.
Qandaraaska halyeeyga reer Argentine ayaa lagu wadaa inuu dhaco xagaaga, Messi ayaana weli saxiixin qandaraas cusub oo uu ku sii dheereynayo joogitaankiisa Catalonia.
Si kastaba ha noqotee, Laporta wuxuu xaqiijiyay inuu ku qanacsan yahay in wadahadalada ay horay u socdaan isla markaana uu rajo weyn ka qabo in 33 jirka uu qalin ku qori doono heshiis cusub Laporta ayaa u sheegay showga LaSexta ‘Jugones’ Jimcihii.
Ku guuleystaha Lixda jeer ee Ballon d’Or ayaa si aan caadi aheyn u dhiibtay codsi wareejin xagaagii hore, waxayna isku dayeen inay ku dhaqmaan qodobka qandaraaskiisa taasoo u saamaxday inuu si bilaash ah uga tago Nou Camp Si kastaba ha noqotee, Barcelona ayaa ku adkaysatay in qodobka uu dhacay iyo in koox kasta oo raadineysa inay la soo saxiixato Messi ay bixin doonto 606 milyan ginni.
Manchester City ayaa ah kuwa ugu cadcad inay la soo wareegaan Messi hadii uu ka tago Catalonia, waxa uu ku riyaaqay xilli ciyaareed aad u wanaagsan oo uu ku qaatay Nou Camp intii uu macalin u ahaa macalinka City Pep Guardiola intii u dhaxeysay 2008-12 Wuxuu sidoo kale lala xiriiriyay dhaqdhaqaaqyo uu ugu dhaqaaqay Paris-Saint Germain iyo ku laabashada waddankiisii Argentina.
inkasta oo laga ciribtiray champions league oo ay PSG ku reebtay wareega 16ka kulan ee ugu dambeysay Champions League, Barcelona wali waxay ku sii jiri kartaa wadada xilli ciyaareed guul leh Fiidnimadii Sabtida waxay la ciyaarayaan Athletic Bilbao finalka Copa del Rey waxayna ku jiraan kaalinta seddexaad ee LaLiga, kaliya labo dhibcood ayey ka dambeeyaan hogaamiyaasha Atletico Madrid.